Size of Paraguay compared to Zimbabwe
Paraguay is around the same size as Zimbabwe.
Zimbabwe is approximately 390,757 sq km, while Paraguay is approximately 406,752 sq km, making Paraguay 4% larger than Zimbabwe. Meanwhile, the population of Zimbabwe is ~14.5 million people (7.4 million fewer people live in Paraguay).
This to-scale map shows a size comparison of Zimbabwe compared to Paraguay. For more details, see an in-depth quality of life comparison of Paraguay vs. Zimbabwe using our country comparison tool.